तपाईंको प्रियजनलाई पार्सलहरू पठाउन चाहनुहुन्छ? समाधानमा अवस्थित पार्सल डेलिभरी सेवाको साथ अब यो सम्भव छ। केवल तपाईंको स्मार्टफोन वा आईफोन उपकरणमा केही ट्यापहरू राख्नुहोस्, र तपाईंको प्रियजनहरूलाई पठाउन र प्राप्त गर्न पार्सलहरू सुरू गर्नुहोस्।
चीजहरू छुटकारा पाउनुहोस्
ट्राफिक जामबाट जोगिन चाहनुहुन्छ र चाँडो मा नै तपाईंको इच्छित गन्तव्यमा पुग्न चाहनुहुन्छ? यहाँ तपाइँलाई मोटो सेवाहरू प्रस्तुत गर्दैछ जुन तपाइँको लागि शून्य ट्राफिक भीड सुनिश्चित गर्दछ।
A Moto Now बुक गर्नुहोस्
प्रत्येक सवारी, खाना वितरण वा पार्सल डेलिभरीको साथ यो अद्वितीय मार्फत गरिन्छ र सबै एक अनुप्रयोगमा, तपाईं सुन्दर कमिसनहरू कमाउन शुरू गर्नुहुन्छ। तपाईको प्रयोगकर्तालाई अनौंठो र अद्भुत सवारी र खाना र पार्सल डेलिभरी अनुभव प्रदान गर्नुहोस् र पहिलो दिनदेखि आयोगहरू कमाउन सुरु गर्नुहोस्!
यो अनौंठोको साथ एकै अनुप्रयोगमा आज तपाईको अनौठो राइड हिलिंग र डेलिभरी व्यवसाय सुरू गर्नुहोस्, तपाईको ग्राहकहरुलाई यस्तो कहिल्यै सेवा नदिनुहोस्, बाटोमा ठुलो नाफा कमाउनुहोस् र टाइटन बन्नुहोस् जुन तपाईं बन्नु भएको छ!
बुक गर्न ट्याप गर्नुहोस् केवल तपाईको फोन उठाउनुहोस् र राख्नुहोस् जहाँ तपाईं जान चाहनुहुन्छ। अनुप्रयोग तपाईं कुनै समय मा ड्राइभर हुन प्राप्त गर्नेछ
ड्राइभर विवरण प्राप्त गर्नुहोस् एक पटक तपाईंको सवारी अनुरोध स्वीकार भएपछि, अनुप्रयोगले स्वतः ड्राईभरको सबै विवरणको बारेमा तपाईंलाई सूचित गर्दछ कारको मेक र मोडेल सहित।
ट्र्याक र गाईड ड्राईभरले तपाईंलाई पुग्नको लागि लैजाने मार्गमा एक चोटि हेर्नुहोस्। उसको सहि स्थान ट्रेस गर्नुहोस् र आवश्यक भएमा उसलाई गाइड गर्नुहोस्।
हुप इन र सवारी एक पटक ड्राइभर तपाईं पुग्दा, बस हप इन र यात्रा आनन्द। अनुप्रयोगले भाडा हिसाब गर्नेछ र यात्राको अन्त्यमा तपाईंलाई चलानी दिन्छ।
१००% सुरक्षा र सुरक्षा सधैं
हाम्रो ड्राइभरहरू कानुनी इजाजत पत्र राख्छन् र पूर्ण प्रशिक्षित छन् जसको अर्थ यो छ कि हरेक चोटि तपाईं हामीसँग सवारी गर्नुहुन्छ तपाईंलाई १००% सुरक्षा र १००% सुरक्षाको आश्वासन दिन सकिन्छ।
आज अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
(नि: शुल्क नि: शुल्क)
सवारी लिन चाहानुहुन्छ जुन तपाईलाई आजीवन याद छ? त्यसो भएपछि, यो अद्वितीय अनुप्रयोग आज डाउनलोड गर्नुहोस्, यसमा दर्ता गर्नुहोस् र जीवनभरको अनौंठो सवारीको आनन्द लिनुहोस्। एन्ड्रोइड प्ले स्टोर र एप्पल अनुप्रयोग स्टोरमा उपलब्ध छ।
एक कल प्लेस र एक सवारी बुक / एक अर्डर राख्नुहोस्
चिन्तित हुनुहुन्छ कि तपाईसँग इन्टरनेट छैन वा कोही अनुप्रयोग प्रयोग गर्न अभ्यस्त छैन? नगर्नुहोस्! हामी यस मार्फत तपाईंलाई सहयोग गर्नेछौं! केवल हामीलाई कल गर्नुहोस् र तपाईंको लागि सवारी, खाना अर्डर वा पार्सल अर्डर प्राप्त गर्नुहोस्।